Iran: Bilaogera momba ny Tontolo Iainana Torian’ny Manampahefana Eny Amin’ny Fitsaràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2011 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, ភាសាខ្មែរ, Ελληνικά, اردو, বাংলা, English
Taorian’ny nanoratako lahatsoratra iray momba ny fanaovan-dàlana iray, izay ny tena tanjona dia ny hampandalovana fantsona iray hitaterana solika hamakivaky ny faritra voajanahary arovana ao ‘Tang-e- Sayad’, Ny Biraom-panjakana Miaro ny Tontolo Iainana ao Chahrmahale Bakhtyari dia manenjika ahy ary tsy maintsy miatrika fitsarana eo anatrehan’ny mpitsara ao amin’ny tanànan’i Shahre Kurd aho. Ny lahatsoratro mikasika ity lohahevitra ity dia naverin’ireo vohikala maro navoaka indray.
Tanatin'ilay lahatsoratra naha-be resaka iray volana lasa izay, nilaza i Houman Khakpour [fa] fa ny Biraom-panjakana Miaro ny Tontolo Iainana dia tsy nanisy olana velively tamin'ny fanomezana alàlana ny hamakivakian'ilay fantsona fitaterana solika sy ny lalambe 10 km eo afovoan'ny valan-javaboahary arovana iray.
Mojgan Jamshidi, mpanao gazety iray malaza amin'ny resaka tontolo iainana sady bilaogera koa, dia zendana tamin'ny vaovao sady niteny fa tsy sendra hetsika toy izany izy tato anatin'ny 40 taona farany. Hoy izy manoratra [fa]:
Animal Persian milaza fa [fa] i Houman dia mandalina ny olan'ny tontolo iainana amin'ny maso tsy miangatra ao amin'ny bilaoginy. Traikefa 19 taona no ananany amin'io sehatra io. Miteny ilay bilaogera fa toa tsy mionona fotsiny amin'ny fanatantavànana (fanivànana) bilaogy momba ny tontolo iainana, fa koa mikendry mihitsy ny bilaogera amin'ny maha-bilaogera.